Zonke iiVenkile zeApple e-UK ngoku zivuliwe | Ndisuka mac
Umfanekiso ophethe eli nqaku ubonakala ngathi wehlile kwimbali, ubuncinci okwangoku. Ubhubhane oluveliswe yiCoronavirus lubangela ukuba uqoqosho lwamazwe luwele phantsi. Iinkampani ezininzi kuye kwafuneka zivale kwaye iivenkile ezininzi zibambe kangangoko zinako. Nangona iApple ingenangxaki zininzi zemali, kuyinyani ukuba iiVenkile zeApple zivaliwe kwihlabathi lonke ixesha elide. Kwamanye amazwe bayaqhubeka ngoluhlobo kodwa e-UK okwangoku zivuliwe zonke.
I-Apple ayisiyiyo enye yeenkampani bahlupheke kakhulu kwingxaki yezoqoqosho iveliswe yi-OCVID-19. Kungenxa yokuba icandelo lezobuchwephesha lelinye lezona zixhamle kakhulu nangona ngoku iziphumo zihlawulwe. Nangona kunjalo, uninzi lweeApple Stores ezinenkampani kwihlabathi liphela zivaliwe iinyanga ezininzi ukunciphisa usulelo phakathi kwabantu.
E-United Kingdom ngoku, imeko ibonakala ikwintlambo yoxolo kwaye amanani aqala ukuhamba. Ngenxa yenqanaba lokugonya, abantu abavelise izilwa-buhlungu kunye nezinye iindlela zococeko, uApple uthathe isigqibo sokuba lixesha lokuba avule kwakhona iVenkile yeApple elizweni. Ngaloo ndlela zonke iivenkile ezingama-38 zivulekile eluntwini nangona kufanelekile amanyathelo anje ngokusetyenziswa kwemaski, umgama phakathi kwabantu kunye nabanye kufuneka baqhubeke nokuthobela.
Iivenkile ngokubanzi basebenza ngokunciphisa iiyure, kwaye ezinye zivalwa ngo-18: 00. Abanye, njengevenkile yaseBrent Cross eLondon, bavule de kube ngu-20: 00 emva kwemini, ngelixa iApple White City eLondon ivula kude kube ngu-21: 00 ebusuku
Okwangoku sivulekile ukuthenga ngokubhukisha iseshoni nganye kunye nengcali, ukukhetha i-intanethi kunye nenkxaso yeGenius xa usenza idinga.
Sijonge phambili koku ukuya kwamanye amazwe kwaye siqala ukubona ukukhanya ekugqibeleni kwetonela. Masibambe kancinci ngaphezulu kusele okuncinci (Ndiyathemba njalo).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Zonke iivenkile zaseApple zase-UK ngoku zivulekile